Idatha yedijithali yamkelekile eMalta ngokuHlala okuNinzi kunye neMvume entsha yokuHlala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeMalta Breaking » Idatha yedijithali yamkelekile eMalta ngokuHlala okuNinzi kunye neMvume entsha yokuHlala
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeMalta Breaking • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ifoto ngoncedo lwe-MTA / Residence Malta
IMalta, ichwebakazi elikwiMeditera, ngoku yamkela abemi bedijithali abavela kumazwe angengawo awaseYurophu ngesivumelwano esisandula ukumiselwa seNomad Residence Permit ekujongwe ukuba inike ilizwe lesithathu ilizwe, kubandakanya i-US ne Canada, ithuba lokusebenza kude eMalta okwethutyana . Eli nyathelo liza kuvuleleka kubafaki zicelo abagonyelwe i-COVID-19 kuphela.
Le mvume mitsha yenzelwe ukufikelela kwi-niches entsha ngaphaya kwe-Yurophu, njengoko ukushukumiseka kwehlabathi kuyaqhubeka ukunyuka kunye nokufumana ukuthandwa.
Abantu abanokusebenza kude besebenzisa itekhnoloji kunye noosomashishini abanomdla wokuhamba kunye nokufumanisa amazwe amatsha kunye neenkcubeko zamkelekile.
Abantu abaninzi abanemisebenzi yesiqhelo abasebenza ngoku basekhaya baphonononga iindlela zokudibanisa le ndlela intsha yokusebenza kunye nexesha eliphakathi kunye nexesha elide.
IMalta sele ibambe uluntu olubalulekileyo lwe-digital nomad, ikakhulu olwenziwe ngabantu base-EU abangadingi mvume ngenxa yenkululeko yokuhamba. Imvume entsha yenzelwe ukufikelela kumabala amatsha angaphaya kweYurophu, njengoko ukushukumiseka kwehlabathi kuyaqhubeka ukunyuka kunye nokufumana ukuthandwa, emva kwe-COVID.
"I-Malta iye yaxhuma kwi-bandwagon yemfuno eyandayo yokusebenza okude kwihlabathi liphela, njengoko ubhubhane utshintshile iinjongo kunye neendlela ezintsha zibekwa," utshilo uCharles Mizzi, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seResidency Malta, iarhente karhulumente elawula imvume.
"Abantu abanokusebenza kude besebenzisa itekhnoloji kunye noosomashishini abanomdla wokuhamba kunye nokufumanisa amazwe amatsha kunye neenkcubeko zamkelekile," uqhubeke watsho uMnu. Mizzi. “Ukuba kukho naziphi na izifundo ezifundiweyo kulo bhubhane kukuba abantu bazimisele ukufuduka ngaphezulu kunakuqala. IMalta lilizwe elinokunikezela okuninzi - ukusuka kwimozulu yayo emnandi kunye nendlela yokuphila yesiqithi seMeditera, kwimbali yayo etyebileyo kunye nelifa lemveli, abantu ababuka iindwendwe, iziseko zonxibelelwano lwebhendi ebalaseleyo kunye nokufikelela kwiinkonzo zononophelo lwempilo ezikumgangatho wehlabathi. Ewe kunjalo, oonothwalutho baya kuziva bekhululekile kumzuzu wokufika kwabo apha. Kwaye isiNgesi lulwimi olusemthethweni kunye nolwimi lokwenza ushishino, ukunxibelelana nabantu balapha kuyakuba ngumsebenzi olula. ”
Abo banqwenela ukusebenza eMalta, okwethutyana ukuya kunyaka omnye (ehlaziyiweyo), kufuneka bagonywe, baqinisekise ukuba bangasebenza kude, bengazimeli ndawo. Kuya kufuneka basebenzele umqeshi obhaliswe ngaphandle kweMalta, benze imisebenzi yeshishini kwinkampani ebhaliswe ngaphandle kweMalta, kwaye bangamaqabane okanye abanini zabelo; okanye unikezele ngeenkonzo ezizimeleyo okanye zokubonisana nabathengi abanamaziko asisigxina kwilizwe langaphandle. Inkqubo iqonde ngqo kwaye iMalta yokuHlala kwakhona ithembisa ngenkonzo efanelekileyo elindelwe ngabaphambukeli abaqondayo.
"Abantu bahamba kwaye iMalta yenza imali kulo mkhwa wehlabathi," utshilo uJohann Buttigieg, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seGunya lezoKhenketho eMalta. “Oonothwal’ impahlana beDijithali abasengabo abezorhwebo kubakhenkethi. Ngakumbi nangakumbi abantu abanemisebenzi yesiqhelo abasebenza ngoku ekhaya emva kwe-COVID baphonononga iindlela zokudibanisa le ndlela intsha yokusebenza phakathi kwexesha eliphakathi kunye nexesha elide kunye nokufunyanwa kwezinye iinkcubeko. Siyakholelwa ukuba olu tshintsho lweparadigm ekusebenzeni ukude lulapha ukuhlala, ke akukho xesha lingcono kunangoku lokutsala oosomashishini abanqwenela ukufuduka okwethutyana kunye needigital yenkcubeko yokuhambahamba kwindalo kwihlabathi liphela. IMalta yindawo efanelekileyo, indawo ekhuselekileyo, ethetha isiNgesi, isiqithi saseMeditera. Esona sixhobo siyimfuneko lilaptop elungileyo yokuqhagamshela kwiziseko zonxibelelwano ze-broadband zelizwe ngokubanzi. ”
Ubungqina bokugonywa: AmaMelika nabantu baseKhanada kufuneka basebenzise iVerifly app
I-VeriFLY iphuhliswa kwaye ilawulwa kukuqinisekiswa kwe-biometric kunye nomnikezeli wezisombululo zokuqinisekisa, uDaon. I-VeriFLY ibonelela abahambi ngendlela ekhuselekileyo nelula yokuqinisekisa iimfuno zabo ze-COVID-19 zokufika kwabo. Emva kokwenza iprofayili ekhuselekileyo kwi-VeriFLY app, iDaon iqinisekisa ukuba idatha yomthengi iyahambelana neemfuno zelizwe kwaye ibonakalisa ukudlula okanye ukusilela umyalezo. Lo myalezo ulula ulungelelanisa ukungena kunye nenkqubo yokuqinisekisa amaxwebhu ngaphambi kokuhamba. Le app ikwabonelela abahambi ngezikhumbuzo xa iifestile zabo zokuhamba zisiya esiphelweni okanye nje ukuba ubungqina buphelelwe. Funda nzulu ngokundwendwela daon.com/verify.
Ulwazi oluthe kratya malunga neMvume yokuHlala kwiNomad yaseMalta inokufumaneka indawo yokuhlala.gov.mt/Umbono.
Iziqithi ezinelanga zaseMalta, embindini woLwandle lweMeditera, likhaya kuxinaniso oluphawuleka kakhulu lwelifa lemveli elakhiweyo, kubandakanya ubuninzi obuphezulu beeNdawo zeLifa leMveli le-UNESCO kulo naliphi na ilizwe. IValletta, eyakhiwe ziiKnights ezinekratshi zaseSt.John, yenye yeendawo zeUNESCO kunye neKomkhulu laseYurophu leNkcubeko ngonyaka ka-2018. Ilungelo labazali baseMalta kuluhlu lwamatye olusuka kwelona lizwe lidala limi ngelityebileyo emhlabeni, laya kobunye uBukhosi baseBritane. Ezona nkqubo zinamandla zokuzikhusela, kwaye kubandakanya umxube otyebileyo wolwakhiwo lwasekhaya, lenkolo kunye nolwezomkhosi ukusuka kumaxesha amandulo, aphakathi kunye nasekuqaleni. Ngemozulu enelanga entle, iilwandle ezinomtsalane, ubomi obuchumayo kunye neminyaka engama-7,000 yembali ebangel 'umdla, kuninzi ekufuneka ukubonile kwaye ukwenzile. utyelelo.com